Ukhala ngokuphucwa izisebenzi - Ilanga News
Home Izindaba Ukhala ngokuphucwa izisebenzi
Ukhala ngokuphucwa izisebenzi
Umasipala owenze kahle KwaZulu-Natal
UBUHOLI bukaMasipala wasoKhahlamba, okuyiwona wodwa kwabawu-54 KwaZulu-Natal owenze kahle ngokomcwaningi-mabhuku, buthi bufike kanzima lapho lo masipala ukhona, njengoba uthole umbiko ongenagcobho amahla-ndla amathathu elandelana.
UMnu Mlungisi Ndlangisa (osesithombeni) oyimeya yasoKhahlamba, utshele ILANGA ukuthi yize sekukhulunywa kahle ngomasipala wakhe, izinto zike zaba zimbi kangangokuba ngo-2011 umasipala ufakwe ngaphansi komlawuli ngemuva kokulahleka kwemali engaphezulu kuka-R20 million okuze kube yinamuhla kayaziwa ukuthi yashonaphi.
Uthi kunzima ukuhlala unegama elihle ngoba nabanye omasipala, izinkampani ezizimele nemi-nyango kahulumeni sebefuna izisebenzi zikamasipala wakhe, okubenza bahlale benezikhala okumele bazivale.
Yize eqale ukuqhoqhobala
isikhundla sokuba yimeya kulo masipala ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya lwango-2016, kodwa ubesenesikhathi eside esebenza kuwona. UMnu Ndlangisa ungowokuzalwa eDukuza,
eBergville, uneziqu zePublic Administration azithole eTechnikon Orange Free State, okuthe ngo-2006-2011 waba yikhansela.
Ngo-2011 ube yimenenja ehhovisi lemeya. Uthi umshado we-ANC neNFP othathe lo masipala kwi-IFP ngo-2011, ungene izinto zimapeketwane. “Ngaleso sikhathi bekungekho ngisho imenenja kamasipala, kunomlawuli, kunge-kho nomuntu obhekelele imali.
“Lo masipala ubucwile ezikwe-letini, ungenayo nemali yokwenza izidingo zomphakathi, kwazise bekuholelwa izisebenzi ebeziphithizela nje, kungaziwa ukuthi
“Ngicabanga ukuthi ukuqashwa kwabantu abazi umsebenzi ngaso sonke isikhathi yikho okusenze sagcina sesilapho sikhona manje,” kusho yena. Uthi ubuholi obunge-ne ngo-2011 kudingeke ukuba bukhuculule, kuqashwe nabantu abadingekayo, abawaziyo umsebenzi.
“Kudingeke ukuthi kube nezi-nqubo ezicacile okusetshenzwa ngazo nokube wumhlahlandlela nami engifikele kuwona ngaqhu-beka nawo ngoba omasipala aba-ningi ngiyakholelwa ekutheni baguqiswa wukuthi kusuke kunabantu abangazi ukuthi benzani nabangenawo umbono ocacile,” kusho yena.
Uthi ngaphansi kobuholi bakhe lo masipala usuhlabane ngezindo-ndo eziningi ngenxa yokuthi noma kuwumasipala wasemakhaya ongakwazi ukuziqoqela imali, kodwa le owabelwa yona, uyisebenzisa ngendlela.
UKhahlamba yindawo eyaziwa kakhulu ngezokuvakasha, uMnu Ndlangisa uthi ngesikhathi bethatha umasipala, bekunabanikazi bamapulazi abebengafuni ukukho-khela izidingo ngoba bekhala ngokuthi kabazitholi.
“Kuyimanje ngingasho ukuthi sesiyakwazi ukuqoqa u-80% waleyo mali ngoba izidingo siyaziyisa kubantu. Kawukho umuzi owakhele lo masipala ongenawo ugesi, ngapha-ndle kwalabo abakhe emapu-lazini esigcina siba nezingqinamba zokunge-na khona uma abanikazi bawo bengavumi.
“Ziningi nezi-ngqalasizinda esesizakhile ebezingekho phambilini, okubalwa
amahhovisi okwenza izincwadi zokushayela.
“Siphinde salungisa amadolobha ethu, iWinterton neBergville ngo-kufaka itiyela namarobhothi,
okuyinto ebingekho phambilini,” kusho yena.
Uthi baphinde bachitha izizu-mbulu zemali bakha iMulti-purpose Centre lapho kunehholo, amahhovisi nenkundla yezemidlalo okuyizinto ebezingekho nhlobo phambilini.
Njengoba kuqala unyaka omusha wezimali, uthi banemali engango-R20 million yezingqalasizinda, u-R11 million wokufakela ugesi imizi esanda kwakhiwa no-R2.5 million abazoqhubeka nokulungisa ngawo amadolobha.
UMnu Nkosingiphile Malinga, oyimenenja kulo masipala, ozalwa eMsinga – ongene kulesi sihlalo ngonyaka odlule engumqondisi emnyangweni wakwa-technical kusukela ngo-2012 – uthi bayazi-qhenya ngehhovisi lentsha lapho kunezinhlelo eziningi okubhekelelwa kuzona intsha yasendaweni.
“Ezintweni ezenziwa kuleli hhovisi, wukuvakashelwa kwezikole kugqugquzelwa intsha ngeze-mfundo, wukunikezelwa kwemifu-ndaze egcwele kubafundi abane abaphumelele kahle u-matric, wukuklonyeliswa kwabafundi abawu-100 abaphumelele kahle, kuthi abawu-10 abahambe pha-mbili banikezelwe ngama-tablet,” kusho yena.
Uthi abafundi abanikezwa imifundaze egcwele, kumele babe semkhakheni we-Engeneering, i-Accounting neTown Planning.
Lo masipala usanda kuhloni-shwa ngendondo kamasipala owenza kahle ngabe-Chartered Institute of Goverment Finance Audit and Risk Officers (CIGFARO).
Ngonyaka odlule uhlomule ngezindondo ezimbili kwiKZN Premier’s Awards okungeyeBest Municipality neyeBest Municipal Manager, okuklonyeliswe ngayo uMnu Siza Sibande, obekulo masipala ngaleso sikhathi.
Previous articleUzishaya isifuba ngamakhosikazi (15)
Next articleUtholwe enqunu ‘obulawe ngosibali’